Xog-ururinta Fidinta Barnaamijka Dugsiga Ka Dib ah ee APS (Somali) Survey
Xog-ururinta Fidinta Barnaamijka Dugsiga Ka Dib ah ee APS (Somali)
1. WSoo dhowow
Sanadkii 2018, cod bixiyayaashu waxay ansixiyeen miisaaniyada cashuurta ee Dugsiyada Dadweynaha Aurora (Aurora Public Schools, APS) iyaga oo diiradda saaraysa caafimaadka iyo badbaadada ardayda APS. Way mahadsan yihiin Cod bixiyeyaasha Aurora , APS ayaa awoodeen in helitaanka barnaamijyada dugsiga kadib ah ay u fidiyaan in ka badan 1,000 ah dugsiyada xanaanada illaa ardayda fasalka shannaad iyo qoysaskooda sanad dugsiyeedka 2019–20.
APS waxay la shaqeynayaan Machadyada Maraykanka ee Cilmi baarista (American Institutes for Research, AIR) si ay u taageeraan fidinta barnaamijka dugsiga kadib ah. Si fiican si loogu fahmo baahiyaha bulshada Aurora, AIR waxay macluumaad ka ururinayaan qoysaska, maamulayaasha dugsiyada, bixiyayaasha barnaamijka dugsiga kadib ah, iyo xubnaha bulshada iyagoo adeegsanayo Xog-ururintan Fidinta Barnaamijka Dugsiga Ka Dib ah ee APS. Tallada bulshada ayaa muhiim noo ah, waxaana rabnaa inaan ra’yi kaa helno!
Kumaa buuxinaya xog-ururinta?
Xog-ururinta waxaa heli kara qof kasta oo ka tirsan bulshada Aurora — laga bilaabo qoysaska ilaa xubnaha bulshada, maamulayaasha dugsiyada, agaasimayaasha barnaamijka dugsiga kadib ah, iyo iskuduwayaasha goobta dugsiga kadib. Waad buuxin kartaa xog-ururintan haddii aad ku lug leedahay barnaamijyada dugsiga kadib ah iyo haddii kaleba. Xog-ururinta waxay u furan tahay qof walba!
Mudo intee leeg ayay igu qaadaneysaa inaan buuxiyo xog-ururinta?
Buuxinta xog-ururinta waxay qaadan doontaa ku dhawaad 15–20 daqiiqadood. Ma awoodi doontid inaad keydiso jawaabahaaga oo aad dhammaystirto xog-ururinta goor dambe markaad bilowda ka dib. Waxaan rajeyneynaa inaad ku dadaashid inaad ka jawaabto su’aalaha ugu badan ee aad awoodid.
Faa'iidooyinka iyo Halisyada
Macluumaadka ka soo baxa xog-ururintan ayaa ka caawin doona AIR, APS, iyo Kooxda La-talinta ee Nidaamka Dugsiga Kadib ah ee APS inay gaaraan go'aanno ku saabsan habaynta barnaamijka dugsiga kadib ah oo ku saleysan himilooyinkaaga doorbidyadaada, iyo baahiyahaaga. Macluumaadka aad bixiso ayaa sidoo kale naga caawin doona fahamka waxa hadda ka socda barnaamijyada dugsiga kadib ah ee dhammaan bulshada. Tani waa fursad aad ku dhiiban karto codkaaga, waxaana rajeyneynaa inaad nala wadaagi doontid fikradahaaga. Ma jiraan wax halisyo ah oo la saadaaliyay ama la ogyahay oo ka imaan karo kaqaybgalka xog-ururintan marka laga reebo kuwa caadi ahaan lagala kulmo nolol-maalmeedka.
Ma inaan qaataa xog-ururinta?
Xog-ururintan waa ikhtiyaari. Doorashada inaadan kaqaybqaadan siba kuuma samayn doonto. Haddii aad go'aansato inaad kaqeybqaadato, waxaad ka boodi kartaa su'aal kasta ama waxaad joojin kartaa xog-ururinta waqti kasta adigoon ciqaab lahayn.
Asturnaanta iyo xorriyadda ka Bixitaanka
Jawaabahaaga shakhsiyeed ee xog-ururinta waxaa heli kara keliya kooxda AIR; macluumaadkaaga looma bandhigi doono dadweynaha. Jawaabahaaga waxaa lala soo koobi doonaa jawaabo kale iyadoo ujeedoyinka yihiin uga warbixinta APS. Magacaaga kuma isticmaali doono gudaha wax warbix ah. Kaqeybgalku waa ikhtiyaari, kaqeybgalayaashana waxay dooran karaan inaysan ka jawaabin wax su'aalo ah. Ka-qeybgalka xog-ururinta ayaan saameyn ku yeelan doonin ka qeybgalka barnaamijyada dugsiga kadib ah ee ilmahaagu. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid xog-ururinta, fadlan kala xiriir Jill Young taleefanka 312-288-7635 ama jiyoung@air.org. Wixii ah su'aalo guud ee ku saabsan Nidaamka Dugsiga Kadib ah ee APS, fadlan kala xiriir Shannon Blackard smblackard@aurorak12.org ama ka wac 720-614-6478.
Haddii aad qabtid walaacyo ama su'aalo ku saabsan xuquuqdaada kaqeybgala ahaan, fadlan kala xiriir Guddiga AIR ee Dib-u-eegista Machadka, kaas oo ka masuul ah ilaalinta ka qaybgalayaasha mashruuca, IRB@air.org, lambarka lacag la'aanta ah ee 1-800-634-0797, ama c/o IRB, 1000 Thomas Jefferson St. NW, Washington, DC 20007.
Waxaan jeclaan lahaa inaan buuxiyo xog-ururinta. Maxaa xiga ee aan sameeyaa?
Haddii aad fahansan tahay macluumaadka kor ku xusan aadna oggoshahay inaad ka qaybqaadato xog-ururintan, fadlan calaamadee sanduuqa ku xiga "Haa, Waan oggolahay inaan sii wado."
Haddii aadan rabin inaad qaadatid xog-ururinta, fadlan calaamadee sanduuqa ku xiga "Maya, ma rabo inaan sii wado", waadna ka bixi doontaa nidaamka xog-ururinta.
* 1. Miyaad oggoshahay inaad buuxiso xog-ururintan?
Haa, Waan oggolahay inaan sii wado
Maya, Ma rabo inaan sii wado